by Alastair Symondson Tuesday 16 April 2019
Kyle Jarvis 2-28 today against UAE
United Arab Emirates won the toss and decided to bat against Zimbabwe at the Harare Sports Club, Harare in the 4th and final ODI of the series.
United Arab Emirates 175 (Chirag Suri 46, CP Rizwan 45; Kyle Jarvis 2-28, Sean Williams 2-27, Christopher Mpofu 2-39)
Zimbabwe 129 – 7 (Timycen Maruma 35, Regis Chakabva 28; Rohan Mustafa 2-29, Mohammad Naveed 2-26)
Result - Zimbabwe won by 3 wickets (DLS Method) (D/L)
Zimbabwe seal a series clean sweep, edging to victory by just three wickets. Timycen Maruma led the way with the bat, hitting a quick-fire 22-ball 35. #ZIMvUAE SCORECARD ??https://t.co/0auFLR5trL pic.twitter.com/VHyv84FwNN
— ICC (@ICC) 16 April 2019
In another rain affected match, Zimbabwe came away winners by 3 wickets (DLS Method) (D/L). Batting first , United Arab Emirates made 175 with Chirag Suri 46 and CP Rizwan 45 the top scorers and Kyle Jarvis 2-28, Sean Williams 2-27 and Christopher Mpofu 2-39 doing the damage with the ball for Zimbabwe.
In reply, the rain meant that DLS method came into play and Zimbabwe reached the required target with 3 wickets to spare. Timycen Maruma 35 and Regis Chakabva 28 the top run getters and Rohan Mustafa 2-29 and Mohammad Naveed 2-26 the top wicket takers for UAE.
Zimbabwe won the four match series 4-0.
Zimbabwe - Brian Chari, Regis Chakabva(wk), Craig Ervine, Sean Williams, Sikandar Raza, Peter Moor(c), Timycen Maruma, Ryan Burl, Kyle Jarvis, Tendai Chatara, Christopher Mpofu
United Arab Emirates - Ashfaq Ahmed, Rohan Mustafa, Ghulam Shabeer(wk), CP Rizwan, Mohammad Naveed(c), Imran Haider, Zahoor Khan, Shaiman Anwar, Sultan Ahmed, Mohammad Usman, Chirag Suri